Daawo Sawirada:- Mid ka mid ah dableydii weerartay Paris oo ka soo muuqday muuqaal uu uga hadlayo weerarkiisa - iftineducation.com
Daawo Sawirada:- Mid ka mid ah dableydii weerartay Paris oo ka soo muuqday muuqaal uu uga hadlayo weerarkiisa
iftineducation.com – Muuqaal lagu baahiyay baraha bulshada sida Twitter ayaa waxaa ka soo muuqday mid ka mid ah saddexdii ruux ee weeraray magaalada Paris, kadib howl gal qaatay saddex maalmood oo sababay geerida ilaa 17 ruux.
Ameyd Coulibaly oo ahaa ninkii weeraray goobta laga dukaameysto ee ay leeyihiin Bulshada Yuhuuda ka soo muuqanaya muuqaalo kala duwan, isagoo labisan dhar kala duwan oo kala ah dharka dhaqanka Islaamka iyo kuwa reer galbeedka sida Jaakad madow Liither ah.
Ninkan ayaa dhiira gelinaya weerarkan uu qaadayo, isagoo ay ay ag-yaaleen hub fud fudud, dhabarka dambe waxaa ka muuqday calanka lagu yaqaano Kooxaha jihaad doonka sida ISIS,
Waxaa uu adeecayay Hogaamiyaha Khilaafada Muslimiinta ee dowladda Islaamiga ee IS, waxaana 32 jirkan uu sheegayaa inay wada shaqeyn ka dhaxeyso isaga iyo labadii nin ee walaalaha ahaa ee reer Kouachi, kuwaasoo arbacadii la soo dhaafay weeraray Xarunta wargeyska Charlie Hebdo, halkaasoo lagu dilay 12 ruux.
Muuqaalkan oo afar qeybood ahaa ayaa mid ka mid ah waxaa ku jiray isagoo xirnaa jaakadaha aan xabadaha karin, kaasoo ahaa muuqaalkiisa u dambeeyay ka hor inta aanu weerarka qaadin.
Waxaa uu ugu baaqay dhamaan Muslimiinta oo dhan inay hubka qaataan, si ay u difaacaan Nabi Muxumed (NNKH).
Sidoo kale waxaa uu sheeganayaa in mid ka mid ah wadooyinka Paris inuu ku diyaariyay baabuur uu ku soo xiray waxyaabaha qarxa.
Ninkan ayaa sheegay inuu yahay askari ka tirsan IS, isla markaana sharaxaya qaabka uu u weerarayo xarunta laga dukaameysto ee ku taal bariga magaalada Paris, halkaasoo oo uu ku dilay afar ruux ka hor inta aan la dilin.
Ciidamada gaarka ah ee Faransiiska ayaa jimcihii soo gaba gabeeyay howl gal qaatay saddex maalmood, iyagoo dilay Said Kouachi iyo Cherif Kouachi oo walaalo reer Algeria ahaa, kadib markii ay weerareen Xarun wargeys, sidoo kale ciidamada ayaa xoog ku galay goobta laga dukaameysto ee Kosher lagu magacaabo, halkaasoo uu dad ku heystay ninka saddexaad ee looga shakisanaa inuu dilay haweeney Boolis aheyd.
Baadi-goob baahsan oo wali ka socda Paris iyo haweeney 26-jir ah oo lagu daba jiro